> Resource> Windows> Olee otú iji iyi Music si PC ka iPad
Ga-amasị m enweghị ka plop m niile MP3 music faịlụ n'ime iTunes dị ka iTunes bụ ugbua a ọgbaghara. Enwere ụzọ enuba m nkịtị music nchekwa jupụtara MP3 si m iPad mgbe ahụ?
Stream music ka iPad si PC nanị na-ahụ na ochie songs na gị iPad na-arahụ? Ọ bụrụ na ị na-esiri izute ọnọdụ a, ị nwere ike na-atụgharị ihe iPad music transfer ngwá ọrụ maka enyemaka. Ebe a bụ a mma, aha ya bụ Wondershare TunesGo (-eji na Windows kọmputa) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Nke a dị ike iPad music transfer ngwá ọrụ na-enye gị ka ị na-enuba họrọ music faịlụ ma ọ bụ listi ọkpụkpọ na PC gị na ndị iPad ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ndị music faịlụ nwere kedi formats, dị ka AAC, AMR na MKA, ngwá ọrụ a ga-tọghata na-enuba music faịlụ ndị na-ahụ na MP3 usoro.
Download a iPad music transfer ngwá ọrụ na-agbalị gụgharia music si PC ka iPad.
Cheta na: Pleae ego na-akwado iPads, OS, usoro chọrọ na ndị ọzọ.
A zuru ndu banyere otú enuba music si PC ka iPad
Na akụkụ n'okpuru, ga-amasị m na-egosi gị otú ị strimụ music si PC gị iPad na Windows PC. Mac ọrụ nwere ike na-agbalị yiri nzọụkwụ na Mac version. Ugbu a, na-ahapụ 'amalite!
Wụnye na-agba ọsọ a iPad music transfer ngwá ọrụ na kọmputa gị. Mgbe ahụ, i nwere ike a lee anya na njikọ window.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPod ka PC
Na-amalite na, jikọọ gị iPod ka PC site na iji eriri USB. Nke a iPad song transfer ngwá ọrụ ga-akpaghị aka ịchọpụta gị iPod na mgbe ahụ na-egosi ya na isi window.
Nzọụkwụ 2. Stream music site na kọmputa na-iPad
Chọta "Media" ke hapụrụ kọlụm. Pịa ya. Mgbe ahụ, pịa "Music" n'elu akara iji bugote music window. All music faịlụ ugbu a na gị iPad-egosipụta. Pịa "Tinye" na-faịlụ nchọgharị window.
Agagharị gị PC ruo mgbe ị na-ahụ music faịlụ na ị ga-amasị enubakwa n'ime ya. Họrọ music faịlụ na-enuba ha. Ma ọ bụ, site na ịpị abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Tinye", i nwere ike ma na-ahọrọ tinye music faịlụ ma ọ bụ music nchekwa gị iPad. N'oge usoro, eme ka n'aka gị iPad jikọọ.
Ọ bụrụ na i kere ụfọdụ ngosi-etiri listi ọkpụkpọ, na ị na-enwe ike enuba ha gị iPad kwa. Na-ekpe kọlụm, pịa "Playlist". Pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Tinye"> "Tinye Playlist si Computer". Mgbe ahụ, enuba na listi ọkpụkpọ gị iPad.
Nke ahụ bụ zuru ndu banyere otú enuba music si PC ka iPad. Mgbe ị na-elele gị iPad, ị ga-ahụ ma nke ọhụrụ songs na ndị agadi na-ahụ. Ọ bụ ihe ịtụnanya, ọ bụghị ya? Ugbu a, download TunesGo na-agbalị ya onwe gị!
Olee otú mmekọrịta Movies ka iPad
Windows XP Nọgidere Na-eme ịgbanyụ [Edozi]